Hel Xirfado & Tababar Aad Doonto - Dulmarka Barnaamijka Shahaadada »Jaamacadda Hodges
U dooro Jaamacadda Hodges Barnaamijka Shahaadadaada
Waa maxay farqiga u dhexeeya Shahaadada, Shahaadada Qalinjabinta, Shahaadada, iyo Shahaadada Warshadaha?
Shahaadooyinka qalin-jabinta waxaa loogu talagalay kuwa hore u haystaa ugu yaraan shahaadada Bachelor-ka laakiin raba shaqo koorso heer-qalin ah isku mid ah ama takhasus kale. Badanaa, kuwa haysta shahaadooyinka qalin-jabinta ayaa ka faa'iideysan doona barnaamijyadan inay ku daraan saacadaha simistar-ka qalin-jabinta (sida caadiga ah 18) si ay u gaaraan guusha tacliimeed ee loogu baahan yahay in lagu baro koorsooyinka heerka kuleejka ah.
Barnaamijyadani sidoo kale waxay soo jiitaan kuwa oo hadda ku sii jiraya shahaadada qalin-jabinta kuwaas oo doonaya inay ku takhasusaan xoojinta (sida caadiga ah saacadaha 9 ee qalin-jabinta) ama u baahan saacado dheeraad ah si ay u gaaraan 18 saacadaha deynta ee loo baahan yahay si loo dhammaystiro Degree-ga. Tusaale ahaan, qof ka qalin jabiyay MBA oo manhajkiisu ahaa ganacsiga guud laakiin danaha iyo / ama shaqada ay ka mid yihiin Xisaabaadka Caddaaladda iyo Imtixaanka Khiyaanada ama Amniga Internetka, waxay u qaadan karaan shahaadada inay tahay “wax lagu daro” shahaadada mastarka oo ay la kulmaan heerka ugu hooseeya ee aqoonta wax ku baro edbintaas la xushay.
Ugu dambeyntii, Grad shahaadooyinka waxaa loo qaadan karaa inay yihiin aqoonsi gooni ah horumarka shaqadiisa ama u siinta gaadiid xirfadaha iyo cusboonaysiinta aqoonta.
Tusaalooyinka Shahaadooyinka Qalin-jabinta
Xisaabaadka Forensic iyo Imtixaanaadka Khayaanada
Waxbadan Ka Baro Shahaadooyinkayada Qalinjabinta
Shahaadooyinka shahaadada koowaad iyo Shahaadooyinka Warshadaha
Shahaadooyinka shahaadada koowaad waxaa loogu talagalay kuwaas ka diiwaangashan barnaamijka shahaadada Associate ama Bachelor kuwaas oo doonaya xoogga saar xulashada xulashada aag la siiyay. Barnaamijyadani waxay u oggolaanayaan ardayda jaamacadda dhigata inay kasbadaan aqoonsiyo dheeri ah, iyaga oo siinaya a tartanka tartanka maadada ay wax ku baranayaan.
Manhajka jaamacada Hodges wuxuu kahadlayaa mowduucyo kaladuwan iyo culuunta maadooyinka sida ganacsiga, sayniska kombiyuutarka, iyo sharciga elektaroonigga ah. Waa la qaadan karaa kali ahow, waxtar u leh kuwa jecel inay raacaan aag gaar ah oo ay xiiseynayaan iyaga oo aan qaadan koorsooyinka manhajka aasaasiga ah.
Haddii aad raadineyso inaad ballaadhiso xirfadahaaga, laakiin aadan u baahnayn inaad qaadato dhammaan barnaamijyada shahaadada xirfadeed, Hodges sidoo kale wuxuu bixiyaa noocyo kala duwan shahaadooyinka aan deyn-ku-xirnayn ee warshadaha gaar u ah taasi waxay noqon kartaa taam.
Tusaalooyinka Shahaadooyinka Jaamacadeed
EBusiness Software ama e-Ganacsi Ganacsi
Naqshadeynta Animation ama Soosaarida Naqshadeynta Sawirka
Taageerada Teknolojiyada Macluumaadka ama Caawinta Miiska Caawinta
eDiscovery iyo eLitigation
Waxbadan Ka Baro Shahaadooyinkayada Shahaadada Sare
Barnaamijyada Aan Daynta Ahayn Oo La Sharaxay
Hodges Connect barnaamijyada waxaa loogu talagalay in ardayda la siiyo tababar ku saabsan u diyaar garow xoog shaqaale or horumar meelaha. Ku hel tababarka ugu sarreeya barnaamijyada deyn-bixin la'aanta sida Kormeeraha Khadka Koowaad, EMT, ama CPR.
Kormeeraha Safka Koowaad
Wax Ka Baro Hodges Connect